superplasticizer ku salaysan polycarboxylate
dareere polycarboxylate superplasticizer
naphthalene ku salaysan superplasticizer
wakiilka dib u dhigista-sodium gluconate
Qiimaha la bedeli karo ee Polycarboxylate superplasticizer
Haddii aad khabiir ku tahay polycarboxylate superplasticizer, waa inaad ogaataa in qiimaha polycarboxylate superplasticizer had iyo jeer la bedeli karo, sida birta oo kale. Sababta qiimaha la bedeli karo Sida alaabada kale, polycarboxylate superplasticizer sidoo kale waxaa lagu sameeyaa alaabteeda ceeriin, sida TPEG,HPEG,crylic ac ...
Polycarboxylate superplasticizer dareere
Sida aynu wada ognahay, polycarboxylate superplasticizer waa jiil cusub oo la taaban karo. Waxay gaari kartaa 30% saamiga dhimista biyaha iyadoo la eegayo 0.2% ilaa 0.3%. Si loo gaaro 20% saamiga biyaha dhimista, qiyaasta sodium naphthalene formaldehyde waxay noqon doontaa ku dhawaad ​​0.8% -1%. Mideey qiimaha polycarboxylate superplasticiz...
Hordhaca Isku-dhafka La taaban karo
by admin 21-09-24
Fahamka isku-darka la taaban karo - Isku-darka la taaban karo waa mawduuc adag laakiin aad bay muhiim u tahay in la fahmo waxa isku-dhafka ah ee la heli karo iyo waxa ay qabtaan. Isku-darku waa maaddooyinka shubka ku jira oo aan ka ahayn shayga sibidhka, biyaha, isku-darka ama fiilooyinka rein...
Nooc cusub oo ah polycarboxylate superplasticizer
Maalmahan, amarro badan oo badan ayaa bilaabay inay soo saaraan. Waxaan u dhoofin dalalka shisheeye iyo sahayda Chinese readymix warshad shuban, warshad batching iyo kuwa kale. Hadda tignoolajiyadayada ayaa soo saaraya polycarboxylate superplasticizer dhamaystiran. Faa'iidooyinka ay leedahay waa macaamiisha isticmaalaya polycarboxylate superpl ...
Waa maxay polycarboxylate superplasticizer? Waa maxay faa'iidada in lagu dabaqo goobta dhismaha?
by admin 21-09-06
Polycarboxylate superplasticizer waa jiilka saddexaad ee wax qabad heer sare ah oo la sameeyay kadib balastarkii caadiga ahaa ee uu matalo kaalshiyam alwaax ah iyo balaastiiste uu matalo taxanaha naphthalene. Polycarboxylate ku salaysan superplasticizer waa curiye
Isticmaalka Chengli Sodium Lignosulfonate
by admin 21-08-14
Sodium lignosulfonate, sidoo kale loo yaqaan lignosulfonic acid sodium cusbo, waa surfactant anionic ka samaysan saxarka alwaax, oo leh miisaan molecular dhexdhexaad ah iyo content sonkorta hoose. Sida jiilkii ugu horreeyay ee isku-darka la taaban karo, Chengli sodium lignosulphonate waxay leedahay astaamo dambas hooseeya, ka kooban gaas hooseeya iyo la-qabsi xooggan ...
Isku darka la taaban karo
by admin 21-08-06
Si loo hagaajiyo karti-shaqsiyeedka la taaban karo, xoogga isku-buuqa iyo hoos u dhigidda qiimaha, dhirta shubka ah waxay inta badan ku daraan isku-darka. Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan: wakiilka biyaha dhimaya, wakiilka bamgareynta, dib-u-dejiyaha shubka ah, xumbo-sameeyaha, dardar-geliyaha, biyuhu-celinta, wakiilka hawo-gelinta, wakiilka ka-hortagga barafka iwm. Nooc kasta ...
Waa maxay Sodium Gluconate? Sideen u isticmaali karnaa?
by admin 21-07-20
Sodium gluconate waxa kale oo loo yaqaan cusbada sodium ee gluconic acid. Waa budo cad, aan sun ahayn, waxayna ku fiican tahay xasilloonida kulaylka. Intaa waxaa dheer, waa mid aad u milmay biyaha, wax yar oo khamriga ah, oo aan lagu milmin ether. Waxay door muhiim ah ka ciyaartaa dhinacyo badan sida dhismaha, dharka dharka...
Dhibaatooyinka iyo xalalka isticmaalka polycarboxylate wax lagu daro
by admin 21-07-13
Iyada oo la adeegsanayo isticmaalka ballaaran ee polycarboxylate additive, dhibaatooyin badan oo codsi ah oo lagu soo bandhigay horteena. maanta waxaan ka wada hadli doonaa maxay yihiin dhibaatooyinkan iyo sida loo xalliyo dhibaatooyinkan. 1, intee in le'eg oo biyo ah iyo sibidh ah waa inaan ku darnaa ka dib isticmaalka polycarboxylate additive Polycarboxylate additive ...
by admin 21-06-23
Sodium Naphthalene sulfonate waa nooc ka mid ah isku-darka la taaban karo ee waxtarka sare leh. Waa budo brown jaale ah. Isku-dhafkan ma aha wasakh, deegaan saaxiibtinimo, iyo mid aan sun ahayn. Waxay ku milmi biyaha si fudud, waxay leedahay waxqabad deggan. Faa'iidada gaarka ah waxaa ka mid ah karti-shaqsiyeed sare, yaraynta biyaha sare ...
by admin 21-04-08
Polycarboxylate superplasticizer waa jiilka saddexaad ee superplasticizer shubka ah kaas oo horay uga soo baxay nooca calcium lignosulfonate iyo nooca naphthalene superplasticizer. Polycarboxylate superplasticizer waa wax ka beddelka superplasticizer shubka ah oo ay baaris ku sameysay tignoolajiyada cusub. waa envi cagaaran ...
Farqiga u dhexeeya nooca yaraynta biyaha ee polycarboxylate superplasticizer iyo nooca haynta slump
by admin 21-04-07
Warshado badan oo la taaban karo oo la taaban karo ayaa leh labadaba nooca biyo dhimista polycarboxylate superplasticizer iyo nooca haynta slump, laakiin waa maxay farqiga isticmaalka u dhexeeya? Marka walxahaaga shubka ah sida sibidhka, wadar ahaan iyo ciid ku filan yihiin, kaliya biyaha yareeya nooca polycarboxylate superplasticizer ayaa...
Shirkadda Binzhou Chengli Building Materials Co., Ltd.
Sida ay baahidaadu tahay, adiga kuu habbee, oo ku siiya alaabo ka qiimo badan.